မကြာမီကဘလော့ဂ်ပို့စ်များ - MH ဘလော့ - Ningbo MH
RSS ကိုမှတဆင့် Subscribe
အဆိုပါ 122TH Canton တရားမျှတသော
အဆိုပါ 122nd Canton တရားမျှတသောကွမ်ကျိုး, တရုတ်အတွက်မကြာမီကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆင်းလှသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်အသေးစိတ်, အဆင့်သုံးဆင့်သို့အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်:
phase ငါ: 15th အောက်တိုဘာ ---- 19th အောက်တိုဘာ, 2017
ထုတ်ကုန်: ယန္တရား, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ironware နှင့်အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ
phase II ကို: 23rd အောက်တိုဘာ ---- 27th အောက်တိုဘာ, 2017
ကုန်ပစ္စည်း: ကုန်စည်, လက်ဆောင်နှင့်နေအိမ်အလှဆင်
အဆင့် III ကို: 31st အောက်တိုဘာ ---- 4th နိုဝင်ဘာ, 2017
ကုန်ပစ္စည်း: ချည်မျှင်နှင့်အထည်, အဝတ်, ဖိနပ်, ရုံးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာများ
လိပ်စာ: အမှတ် 380 Yuejiang အလယျပိုငျးလမ်း, တရုတ်သွင်းကုန် & Export ကို Commodities ပြပွဲခန်းမ
အဆင့် III ကို:
သင်သည်လည်းအဆင်းလှသောတက်ရောက်ရန်လိမ့်မယ်ဆိုပါကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောဂုဏ်အသရေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ကိုယ့်ကိုသွားရောက်လည်ပတ်ပေးဆောင်။ ကွမ်ကျိုးမှာရှိသမျှကိုသူငယ်ချင်းများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့မျှော်လင့်။
အဆိုပါ 121TH Canton တရားမျှတသော
in	Uncategorized ပွပှဲ
အဆိုပါ 121th Canton တရားမျှတသောကွမ်ကျိုး, တရုတ်အတွက်မကြာမီကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆင်းလှသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်အသေးစိတ်, အဆင့်သုံးဆင့်သို့အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်:
phase ငါ: 15th Apr. ---- 19th Apr. , 2017
phase II ကို: 23rd Apr. ---- 27th Apr. , 2017
အဆင့် III ကို: 1st မေလ ---- 5th မေလ, 2017
ကျနော်တို့ 2017 နွေဦးပွဲတော်အားလပ်ရက်များအဘို့အဖြစ်ကျနော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ 27nd မှဇန်နဝါရီ 2th ကနေချိုးယူမည်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ 3rd (သောကြာနေ့), 2017 အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုအကြောင်းကြားချင်ပါတယ်။ အရေးပေါ်သောအရာတို့ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ဇန်နဝါရီ 22nd (တနင်္ဂနွေ) နှင့်ဖေဖော်ဝါရီ 4th (စနေနေ့) 2017 အပေါ်တာဝန်ပေါ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေမှုအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်နားလည်မှုအဘို့တွေအများကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်ကျေးဇူးတင်စကား။ ကျနော်တို့နှစ်သစ်ကူး၌သင်တို့ကိုအများကြီးပိုနီးစပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာနှင့်သင်လာမည့်နှစ်တွင်အောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။
အားလပ်ရက်အချိန်: ဇန်နဝါရီ 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, ဖေဖော်ဝါရီလ 1st, 2nd
အဆိုပါ 120TH Canton တရားမျှတသော
အဆိုပါ 120th Canton တရားမျှတသောကွမ်ကျိုး, တရုတ်အတွက်မကြာမီကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆင်းလှသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်အသေးစိတ်, အဆင့်သုံးဆင့်သို့အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်:
phase ငါ: 15th အောက်တိုဘာ ---- 19th အောက်တိုဘာ, 2016
phase II ကို: 23rd အောက်တိုဘာ ---- 27th အောက်တိုဘာ, 2016
အဆင့် III ကို: 31st အောက်တိုဘာ ---- 4th နိုဝင်ဘာ, 2016
phase II ကို:
Booth အမှတ် 14.4 B21, 14.4 D21 မူလစာမျက်နှာထောက်ပံ့ကုန်တရားမျှတသော Complex
Booth အမှတ် 14.4 A12-14, B09-11 ချည်မျှင်ပစ္စည်းတရားမျှတသော Complex
Booth အမှတ် 15.4 E29-31 ချည်မျှင်ပစ္စည်းတရားမျှတသော Complex
MH App ကိုယခု MH app ကိုကလပ်ကိုသုံးပါနှင့် join ဖို့ကြိုဆိုအွန်လိုင်းပါ!
l MH APP ကိုများအတွက်ကဘာလဲ?
လျင်မြန်စွာထုတ်ကုန် browse နှင့်တိုက်ရိုက်ကိုးကားရ။
real-time & သင့်ရဲ့ MH salesmen နှင့်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်။
MH ၏နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း Get နှင့်မြှင့်တင်ရေးသတင်းအချက်အလက်များရယူရန်။
l လျင်မြန်စွာ MH App ကိုအပေါ်တစ်ဦးအတည်ပြုထားသောအကောင့်ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျမှတျပုံတငျတဲ့အခါမှာ input ကိုသင့်ရဲ့အရောင်းစာရေး၏အမည်ကိုပါ။
l သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းအတွက် MH App ကို install လုပ်မထားဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
သင်တို့သည်လည်းတိုက်ရိုက်အား Google Play ကနေ App ကိုသို့မဟုတ် App Store မှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ရုံ "ကိုရှာNINGBO MH"App ကို
ကြောင့်နဂါးလှေပွဲတော်ကြွလာမှကျနော်တို့9အပေါ်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်th ဇွန်လ (ကြာသပတေးနေ့) 2016 နှင့် 10 အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်th ဇွန်လ (သောကြာနေ့), 2016 ။ အဆင်မပြေမှုအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်သင့်ရဲ့နားလည်မှုနှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်အများကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်ကျေးဇူးတင်စကား။ ကျနော်တို့နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့ပြန်လာအဖြစ်အမှုအရာကိုကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့တစ်စုံတစ်ဦးက Facebook တွင်အတွက် Ningbo MH စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Co. , Ltd အယောင်ဆောင်နေသည်ဟုနှင့်ငွေတွေအများကြီးထဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် swindling သိရတယ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကြင်နာစွာသင်ငွေပေးချေစေမှီ, ဘဏ်အကောင့်တွင်သတင်းအချက်အလက်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီးကြောင်းသတိပေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရာရှိတဦးက Facebook လိပ်စာဖြစ်ပါသည်: https://www.facebook.com/NingbomhOfficial/
အဆိုပါ 119TH Canton တရားမျှတသော
အဆိုပါ 119th Canton တရားမျှတသောကွမ်ကျိုး, တရုတ်အတွက်မကြာမီကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆင်းလှသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်အသေးစိတ်, အဆင့်သုံးဆင့်သို့အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်:
phase ငါ: 15th ဧပြီလ ---- 19th ဧပြီလ 2016
phase II ကို: 23rd ဧပြီလ ---- 27th ဧပြီလ 2016
အဆင့် III ကို: 1st ---- မေ 5th မေလ, 2016
Booth အမှတ် 15.4 E23, 15.4 H01 မူလစာမျက်နှာထောက်ပံ့ကုန်တရားမျှတသော Complex
ကျနော်တို့ 2016 နွေဦးပွဲတော်အားလပ်ရက်များအဘို့အဖြစ်ကျနော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ 7th မှဖေဖော်ဝါရီလ 13th ကနေချိုးယူမည်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ 14th (တနင်္ဂနွေ), 2016 အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်လာလိမ့်မည်ဟုအကြောင်းကြားချင်ပါတယ်။ အရေးပေါ်သောအရာတို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်အလို့ငှာ, ငါတို့ဖေဖော်ဝါရီလ 6th (စနေနေ့) 2016 အပေါ်တာဝန်အပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေမှုအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်နားလည်မှုအဘို့တွေအများကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်ကျေးဇူးတင်စကား။ ကျနော်တို့နှစ်သစ်ကူး၌သင်တို့ကိုအများကြီးပိုနီးစပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာနှင့်သင်လာမည့်နှစ်တွင်အောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။ အားလပ်ရက်အချိန်: ဖေဖော်ဝါရီလ 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th ကျနော်တို့နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့လုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်လာသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဆက်သွယ်မည်!
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်! လာမယ့်နှစ်သစ်, ကြှနျုပျတို့ 1st ဇန်နဝါရီလ 2016 (သောကြာနေ့) မှာတနေ့ရဲ့အားလပ်ရက်ရှိသည်သွားပါတယ်။ အသစ်ကတစ်နှစ်အတွက်ပိုကောင်းသငျသညျအမှုဆောငျဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့အဆိုပြုချက် Give နှငျ့သငျ IPhone ကို6နှင့် 10000RMB ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်လိမ့်မယ်
ကုမ္ပဏီရူပါရုံကိုအတူ Tallying - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း accessories များနိုငျငံကို
အဆိုပါကငျြ့ဝတျသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ embody, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သငျ့သညျ:
အထည်ချုပ် accessories များဝင်းစကားလုံး
အမည်များ, (တရုတ်မှအင်္ဂလိပ်ထံမှဘာသာပြန်ထားသော) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက်ကြွ, ခွဲခြားရန်လွယ်ကူဖြစ်နဲ့သတိရဖို့လို
အမည်များကိုအင်္ဂလိပ်အသံထွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူသင့်သဘောတူချက်; တရုတ်ဇာတ်ကောင်4ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့မှတ်မိလွယ်တဲ့အတွင်းတွင်သာဖြစ်သင့်ပါတယ်
ဆက်သွယ်ရန်: ရန်သင့်အဆိုပြုချက်, အမည်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးပို့
တစ်ခုမှာပထမဦးဆုံးဆုဆုရှင် (ဆုချီးမြှင့်ထိုက်တန် 10000RMB ဖြစ်ပါတယ်): အမည်များနောက်ဆုံးတော့မွေးစားခြင်းနှင့်အသုံးပြုကြသည်
နှစ်ဦးကစက္ကန့်ဆုချီးမြှင့်ဆုရရှိသူ: အသီးအသီးအဘို့အကာ IPhone ကို 6
(နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဌာနနှင့်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခေါင်းဆောင်များနှင့်ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်များကဖွဲ့စည်း) ကိုအကဲဖြတ်အဖွဲ့ကစုစည်း၏5အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယဆုရဆုရရှိသူဆွေးနွေးရန်နှင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်မည်ဖြစ်သည်။ အမည်များကိုအဘယ်သူအားမျှမွေးစားလျှင်, ထို့နောက်နှစ်ဦးကိုဒုတိယဆုဆုရရှိသူပေးအပ်နှင့်နောက်ထပ်လူမှုရေးလိုင်းများအနေဖြင့်စုဆောင်း
အားလုံးအမည်များမူရင်းဖြစ်သင့်သည်။ MH မူပိုင်ခွင့်ရှိပြီးညာဘက်ကိုသုံးပါနှင့်နောက်ဆုံးအနက်၏ညာဘက်စောင့်ရှောက်။
အသိပေးစာ: အ Qingming ပွဲတော်
ကြောင့် Qingming ပွဲတော်ကြွလာမှကျနော်တို့ကိုဧပြီလ6အပေါ်ပိတ်လိုက်ပါလိမ့်မည်th (တနင်္လာ) 2015 ။ Qingming ယဇျပူဇျော၏အရေးအပါဆုံးနေ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးတို့အားယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ကွယ်လွန်သောသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးစားမှုနှင့်လွတ်ကျက်ပြသနိုင်ဖို့တို့၏သင်္ချိုင်းသွားပါပြီ။ ကျနော်တို့စေခဲ့သည်ဆိုအဆင်မပြေမှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့7အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်thဧပြီလ (အင်္ဂါနေ့) 2015 ။ သင့်ရဲ့နားလည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်ငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီကျွန်တော်ပြန်လာအဖြစ်ချက်ချင်းကိုသင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ 117TH Canton တရားမျှတသော
အဆိုပါ 117th Canton တရားမျှတသောကွမ်ကျိုး, တရုတ်အတွက်မကြာမီကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆင်းလှသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်အသေးစိတ်, အဆင့်သုံးဆင့်သို့အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်:
phase ငါ: 15th Apr. ---- 19th Apr. , 2015
phase II ကို: 23rd Apr. ---- 27th Apr. , 2015
အဆင့် III ကို: 1st ---- မေ 5th မေလ, 2015
Booth အမှတ် 16.3 D01-02 မူလစာမျက်နှာထောက်ပံ့ကုန်တရားမျှတသော Complex
Booth အမှတ် 15.4 G30-31, H14-15Textile ပစ္စည်းတရားမျှတသော Complex
ကျနော်တို့ 20 အဘို့အကြောင်းအသိပေးချင်ပါတယ်15 နွေဦးရာသီပွဲတော်အားလပ်ရက်များ, ငါတို့ကနေချိုးယူပါလိမ့်မယ် ဖေဖော်ဝါရီ. 18th to ဖေဖော်ဝါရီ. 25th နှင့်အလုပ်လုပ်ပြန်လာကြလိမ့်မည် ဖေဖော်ဝါရီ. 26th (ကြာသပတေးနေ့), 2015။ အရေးပေါ်သောအရာတို့ကိုကိုင်တွယ်ရန်အလို့ငှာ, ငါတို့ဖေဖော်ဝါရီလ 15 အပေါ်တာဝန်အပေါ်လိမ့်မယ်th (တနင်္ဂနွေ) နှင့်ဖေဖော်ဝါရီ 28th (စနေနေ့), 2015 ။ အဆင်မပြေမှုအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်နားလည်မှုအဘို့တွေအများကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်ကျေးဇူးတင်စကား။ ကျနော်တို့နှစ်သစ်ကူး၌သင်တို့ကိုအများကြီးပိုနီးစပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာနှင့်သင်လာမည့်နှစ်တွင်အောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။
အားလပ်ရက်အချိန်: ဖေဖော်ဝါရီလ 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th
ကြောင့် 2015 ကြွလာမှကျနော်တို့ကိုဇန်နဝါရီလ 1st 2015 (ကြာသပတေးနေ့) တွင်ပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး 2nd ဇန်နဝါရီလ 2015 (သောကြာနေ့) မှာအလုပျလုပျဖို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေမှုအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်သင့်ရဲ့နားလည်မှုနှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်အများကြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်များနှင့်ကျေးဇူးတင်စကား။ သငျသညျလာမယ့်နှစ်သစ်ကူးအတွက်အောင်မြင်မှုနှင့်ကောင်းသောကံအလိုရှိ၏။ ကျနော်တို့နေသမျှကာလပတ်လုံးကျနော်တို့ပြန်လာအဖြစ်အမှုအရာကိုကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
မကြာသေးမီကအချို့ဖောက်သည်ကဲ့သို့သော (ငါတို့ဥစ်စာအဖြစ်ဆင်တူအီးမေးလ်လိပ်စာရှိသည်သောလိမ်လည်မှုအီးမေးလ်များကိုခံရကြပြီနှင့်) ပိုက်ဆံလိမ်ဘို့, မှားဘဏ်အကောင့်မှငွေပေးချေစေဖောက်သည်ကိုမေးပါ။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ်သတင်းအချက်အလက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီအမည်ကိုအောက်တွင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေဖြင့်ဘဏ်သတင်းအချက်အလက်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ချက်နှင့်အတူအီးမေးလ်ကိုခံလျှင်, ပုံမှန်အားဖြင့်ကတရားမဝင်သို့မဟုတ်အထောက်အထားမခိုင်လုံသောရဲ့မည်သည့်ပြောင်းလဲမှု (တူညီသောအကျိုးခံစားခွင့်အမည်နှင့်အကောင့်နံပါတ်) မပါဘဲအတူတူပင်စောင့်ရှောက်ခြင်းသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် ယင်း၏ veracity စစ်ဆေးနှစ်ဆဖုန်းသို့မဟုတ်ဖက်စ်။
သငျသညျအထူးသဖြင့်အီးမေးလ်နောက်ဆက်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါဤတွင်ကျနော်တို့ MH ကုမ္ပဏီအသုံးပြုသောအားလုံးအီးမေးလ်လိပ်စာစာရင်းပြုစု, ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး:
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအချက်အလက်ခိုးယူသည့် swindler ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် MH ၏နာမ၌လိမ်လည်မှုအီးမေးလ်များကိုပေးပို့ဖို့, သင်ဂရုတစိုက်အီးမေးလ်က password ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အခါအားလျော်စွာကြောင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ 116TH Canton တရားမျှတသော
အဆိုပါ 116th Canton တရားမျှတသောကွမ်ကျိုး, တရုတ်အတွက်မကြာမီကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆင်းလှသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်အသေးစိတ်, အဆင့်သုံးဆင့်သို့အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်:
phase ငါ: 15th အောက်တိုဘာ ---- 19th အောက်တိုဘာ, 2014
phase II ကို: 23rd အောက်တိုဘာ ---- 27th အောက်တိုဘာ, 2014
အဆင့် III ကို: 31st အောက်တိုဘာ ---- 4th နိုဝင်ဘာ, 2014
Booth အမှတ် 15.3 A01-03 မူလစာမျက်နှာထောက်ပံ့ကုန်တရားမျှတသော Complex
MH အပေါ်မှာငါ့အမြင် - MH ဂို့ဘဏ်ခွဲ, နိုင်ဂျီးရီးယား၏ဒေသခံဝန်ထမ်း မှစ.
ငါ့နာမကို Ndubuisi ဘုနျးတျောကို Amaka, MH စက်မှုလက်မှုကုမ္ပဏီအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများစက်ချုပ်၏ဌာနများတွင်မစ္စတာ Robbins ဝူ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ဖောက်သည်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ 2013 အတွက် MH စက်မှုလုပ်ငန်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင် MH စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ငါ့အချိန်အံ့သြစရာများနှင့်တာဝန်ငါ၏အညီအနည်းငယ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ MH စက်မှုလုပ်ငန်းဂို့လူတိုင်းဖော်ရွေတရုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ချစ်သောသူထားတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဟာအမြဲန်ထမ်းအဖြစ်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်သည့်အခါမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတစ်ခု ထား. , "kilode" ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားများအချို့သောစာပိုဒ်တိုများမပြောတတ်, "bawo", "dada ni" ။ ငါတို့သည်လည်း "ni Hao" ကဲ့သို့တရုတ်ဘာသာစကားမှာသူတို့နဲ့အတူအပြန်အလှန်ချစ်ကြတယ်။ MH နိုင်ဂျီးရီးယားထမ်းအံ့သြဖွယ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ ကျနော်တို့မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အထင်ကြီးရလဒ်ကိုအောင်မြင်ရန်အလုပ်လုပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကူညီ။
အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုင်းပြည်အတွင်းပစ္စည်း၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်ရှိနေသော်လည်းအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှာသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး၌ထား၏။ နယူးဟမ်းရှား "သင်၏ရောင်စုံဘဝအတှကျ" ဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူအတိအကျကိုက်ညီသောနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသားအသက်တာသို့အရောင်များထားလိုက်ပါတယ်။
MH ဂို့ထိုကဲ့သို့သောဇာ, ဖယောင်း, headtie, ပစ္စည်းများစက်ချုပ်နှင့်နိုင်ငံတကာအမိန့်ဌာနအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဌာန, ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဝန်ထမ်းအစည်းအဝေးလတိုင်းပထမဦးဆုံးကြာသပတေးနေ့ရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဌာနများအတွက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဆိုင်များနှင့်အကောင်းဆုံးန်ထမ်းပြီးတော့သိသိသာသာသူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်ပိုမိုထိရောက်နှင့်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုန်ထမ်းများကလှုံ့ဆျောဖို့ကူညီပေးသည်ထားတဲ့အတွက်ငွေသားဆုဖြစ်လိမ့်မည်။
သူတို့ရဲ့စျေးကွက်လေ့လာစူးစမ်းဖို့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အခြားပြည်နယ်များမှ MH အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့ငှာဌာနသို့ခရီးသွား၏လှံတံ။ ကျနော်တို့ကုန်စည် MH အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုနိုင်ဂျီးရီးယားကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်၌အကြှနျုပျတို့၏စိတျနှလုံးအများနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုချပြီးအားဖြင့်အနောက်တိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားစျေးကွက်ထိန်းချုပ်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ပါပြီ။ ယခုငါငါတို့သည်ငါတို့၏မစ်ရှင်ပြည့်စုံရာ၌ခန့်ထားပြီဟုမာနထောင်လွှားဖြစ်၏။
မကြာမီက သတင္းေၾကျငာခ်က္ စာတိုက်
01 ဇွန်လ 2017
05 ခုနှစ်ဧပြီလ 2017
16 ဇန်နဝါရီလ 2017
tag ကို မိုဃ်းတိမ်ကို
ပွဲတော် ပန်းချည် ဇာထည် Canton တရားမျှတတဲ့ အထည်အလိပ်
mh Expotextil ပီရူး 2013
သငျသညျ pls အီးမေးလ်ပေးပို့မယ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဂျိုးဇက် Nabugoomu Expotextil ပီရူး 2013
ညဦးယံ၌ကောင်းသော, တစ်ရောင်စုံပြပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့နာမကိုယူဂန်ဒါ, အာဖရိကမှဂျိုးဇက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် .... ချင်ပါသည်...
mh MH အလှဆင်ပနျးပှားကိုတို့နှင့်တိပ်မဂ္ဂဇင်း
မင်္ဂလာပါ Flora, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့ကို Indie ၌အကြှနျုပျတို့၏အကိုင်းအခက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ထင် ...
Flora MH အလှဆင်ပနျးပှားကိုတို့နှင့်တိပ်မဂ္ဂဇင်း
16 မတ်လ 2014
မင်္ဂလာပါကျနော်အိန္ဒိယကနေအိမ်ပြန်-based ရဆေိုးဖြစ်၏။ သငျသညျအပ်ချုပ်ထုတ်ကုန်များ၏ဤမျှလောက်များစွာသောကောင်းသောအမျိုးပေါင်းရှိသည်။ က po ဖြစ်ပါတယ် ...
သတင္းေၾကျငာခ်က္ Home ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား --Threads --Zippers --Ribbon & တိပ် --Ropes --Laces --Buttons --Interlining တစ်ခုကိုချုံ့ခြင်း --Tassel & မြိတ် / --Tailoring ပစ္စည်းများ --Garments & ဆက်စပ်ပစ္စည်း --Sewing စက် & အစိတ်အပိုင်းများ --Fabric --Others ကြှနျုပျတို့အကွောငျး --MH ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် --MH စက်မှုဇုန် --MH သမိုင်း --Trade ရှိုးများ --Our ကိုယ်စားလှယ် --Image Galleries --Video အယ်လ်ဘမ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ --Office တည်နေရာ --Feedback အဝန်း --Blog --App --ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ